A Glimpse of My Life: 2008
ဘလော့ဂ် မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီပဲ... အင်တာနက်ကလည်း စုတ်ပြတ်သပ်... ကြားထဲ အမှုကိစ္စပေါင်း တစ်ထောင် နဲ့ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ဒီနေ့ ပြန် ဘလော့ဂ် ပါပြီ။
Xanga မှာလည်း ကျွန်မရဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ခရီးသွား ပို့စ်ကို မျှော်နေကြပြီ။ အလုပ်ကလည်း မအား၊ ရေးလည်း ရေးချင်စိတ် မရှိနဲ့.. ဒုက္ခ နဲ့ လှလှ နဲ့ တွေ့တော့တာပဲ...
အားလုံးအတွက် ထူးဆန်းသွားမလား မသိဘူး.... လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်အထိ over မဖြစ်သေးပါဘူး ဆိုတဲ့ ကျွန်မဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် အခု သူ့ကို အိုဗာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင် အံ့သြပါတယ်။ အမှန်တော့ အိုဗာ ဖြစ်သင့်တာ ကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ကတည်းကလေ...
သူ နဲ့ ကျွန်မ ချက်ဖြစ်သေးတယ်။ ကျွန်မ သူ့ကို “နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းပါ” ဆိုတဲ့ စကားကို နောက်ဆံတင်းခြင်း၊ ရင်နာခြင်း မရှိပဲ ပြောနိုင်သွားတယ်။ သူ ကျွန်မရဲ့ Xanga ပို့စ် ကို ဖတ်မိတော့ ကျွန်မကို “ဘယ်သူ့ကို နင် သတိရနေတာလဲ” ဆိုပြီး လာမေးတယ်။ ကျွန်မလည်း “လူတစ်ယောက်ပေါ့” လို့ ပြောလိုက်တယ်... သူက "နင့်အတွက် ငါ ပျော်ပါတယ်တဲ့" တဲ့.. ကျွန်မလည်း ပြန်ပြောလိုက်တယ်.. "ကိုယ်လည်း ကိုယ့်အတွက် ပျော်ရွှင်ပါတယ်" ဆိုပြီး.. ဟီးဟီး... ပြီးတော့ ကျွန်မကို ဖေ့ဘွတ်ခ် မှာ ထည့်လိုက်တယ်... funny... အခုမှ ကျွန်မကို ယုံယုံကြည်ကြည် ဖေ့ဘွတ်ခ် မှာ ထည့် နိုင်တယ် ထင်တယ်... ရီရတယ်နော်... ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ “သင်တို့နှစ်ယောက် ဘယ်လို သိခဲ့ကြသလဲ” ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်မက “၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ဒီလိုပဲ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်” ဆိုတာပဲ ရွေးထားတာ သူက ထပ်ကွန့်လိုက်တာက "အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်" တဲ့... :) ဟုတ်ကဲ့.. အဲ့ဒါ မှန်ပါတယ်။ အခုအချိန်ကစပြီး ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားမှာပါ။
ကျွန်မ ရဲ့ စိတ်ကို စိုးမိုးထားတဲ့ သူ တစ်ယောက် ရှိနေတယ်။ :) “ကို” လို့ ခေါ်တယ်ပဲ ဆိုပါစို့။ ဒီထက်တော့ ဘာမှ မပြောချင်သေးဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုက ကျွန်မအတွက် အခုတစ်လော ဘဝဟာ ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ် ရှိလာသလိုပဲ.. အရင်က မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်နေခဲ့တယ်... တောင့်တခဲ့တဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခု ဘယ်တော့မှ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်... ဒါပေမယ့် အခု အရိပ်အယောင်တွေ မြင်နေရတယ်.. The feelings are mutal. ^_^ ဒီ့ထက်တော့ ပိုပြီး ဘာမှ မပြောချင်သေးဘူး။ :D
မပြောချင်ပေမယ့် ပြောရဦးမယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကလည်း အွန်လိုင်းကပဲ။ အရင်ကတော့ အွန်လိုင်းကလူကို လုံးဝ ဆို လုံးဝ မစဉ်းစားတော့ဘူးလို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပေမယ့်... အင်း.. ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲနော်။ တော်သေးတာက သူက ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ မဟုတ်ပဲ ဒီအရှေ့ဖက်ခြမ်းမှာပဲ ရှိတာ.. ပြီးတော့ အချိန် ကွာခြားချက်က ၁း၃၀ ပဲ ရှိတာ။ ဒါကြောင့် "Impossible is Nothing" ;)
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မလည်း ဆက်လက်အိပ်မက်လေးတွေ မက်နေပါလေရဲ့....
အခ်ိန္ 3/12/2008 04:12:00 PM စာေရးသူ - အရုဏ်ဦး